बहिनी : दिदी निवाले अस्ती स्वयम्भु जाँदा आमा को letters खोजेर आमा लेख्दै थियो ।
Posted by Arati at 8:56 PM 1 comment:
अनी ठुलो भएपछिको ।
बदली रहन्छन् ..
यिनै बाटोहरु काट्दा काट्दै
बित्ने रहेछ जिन्दगी
तिनै बाटोहरुमा हिड्दा हिड्दै।
Posted by Arati at 11:14 PM
Posted by Arati at 12:30 PM2comments:
आज मिति १३ अगस्त २०१९ ।
मेरो छोरा निवा पनि सात बर्ष पुगेर आठ लाग्यो । अहिले कक्षा २ मा पढ्दै छ ।मेरो जिन्दगी उसैको सेरोफेरोमा बितिरहेछ । उसलाई स्कुल लाने । पढाउने । नुहाउने । घुमाउने । आदी कामहरु नै मुख्य काम हरु हुन ।
यसो सोच्दा लाग्छ जिन्दगी यतिकै कट्दो रहेछ । फरक फरक अनुभब हरु मा । आफु केटा केटी हुँदाको अनुभब । बिद्यार्थी हुँदाको अनि कामकाजी हुँदाको र अहिले बच्छ हुर्काउदाको । सबै अनुभब हरु मा आफ्नो आफ्नो तितो मिठो कथा हुदो रहेछ । अहिले सम्झदा पुरानो अनुभब रमाइलो लाग्छ अनि फेरी पछी फेरी फर्केर हेर्दा अहिलेको अवस्था को मिस गर्न थालिदो रहेछ ।
सन्तानको माया पनि अचम्मको हुदो रहेछ । जती माया ख नाए पनि नसकिने । एकोहोरो । कहिले काही डर लाग्छ । धेरै मायाको । अनि फेरी म आफैलाई सम्झन पुग्छु । जिन्दगी चक्र रहेछ । घुमी रहने ।
Posted by Arati at 2:28 PM
म : Barry आउदै छ हाम्रो घरमा। उ संग english मा कुरा गर्नु पर्छ है।
छोरा : उ पनि स्कूल जान्छ हो ? ( स्कूल मा english बोल्नु पर्ने भएकोले )
म : जादैन
छोरा : अनी के गर्छ त ?
म : ऊ घरमै बस्छ, बुढो छ नि त।
छोरा: म पनि बुढो हुने !
Posted by Arati at 3:50 PM